Boot azo antoka: ny Linux Foundation to the Rescue. | Avy amin'ny Linux
Tonga i Fedora / Red Hat nilaza fa hampiasa ny lakilen'ny Microsoft (izay openSuse koa mety hanao). Avy eo dia tonga i Ubuntu izay nieritreritra ny hanana ny lakileny manokana ary manala ny GRUB2 (izay niteraka tsikera avy amin'ny FSF ratsy kokoa noho ny vahaolana Fedora). Ankehitriny, James Bottomley, mpanolotsaina teknikan'ny Linux Foundation dia miaraka amin'ny famonjena………… amin'ny fizarana rehetra (tsy ireo efa voalaza ireo)
Ity dia fanovana kely amin'ny vahaolana Fedora amin'ny fampiasana ny lakilen'ny Microsoft. Hanao sonia koa izy ireo mpamadika mialoha inona no hovesatratsy misy fanamarinana sonia) bootloader efa voaorina izay hampiditra Linux (na rafitra miasa hafa). Ity pre-bootloader ity dia azo ampiasaina amin'ny fizarana LiveCD, mpametraka CD / DVD na koa boot amin'ny mode safe ny fizarana izay efa napetraka ary misafidy ny hampiasa azy. Ny vahaolana tsy vitan'ny hoe handray soa ho an'ny mpampiasa ny GNU / Linux, fa koa ho an'ireo mpampiasa ny Operating Systems BSD.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Boot azo antoka: ny Linux Foundation to the Rescue.
INONA NO HATRANY MICROSOFT! Ashhhh, orinasa ratsy ve ... Maharikoriko ireo olona an-tapitrisany ireo ... Sarobidy kokoa izany, misy ny vahaolana 😀 ...
Nefa tadidio fa azy ny ampihimamba, ary rehefa te hanao zavatra mitovy amin'izany indray izy ireo dia hanana fotoana ratsy indray isika.
Vahaolana tena tsara !! 🙂
Tsara ny maheno (vakio xD) izany! 😀
Fantany fa na ho ela na ho haingana dia hisy ny vahaolana. Inona koa, heveriko fa tsy ho iray ihany io, fa mbola hisy vahaolana hafa avy amin'ny sehatra maro ao amin'ny tontolon'ny GNU / Linux.
Ny SECURE BOOT fanta-daza dia iray amin'ireo santionany amin'ny tsy misy ilàna azy sy tsy fahatokisan'ny rafitra fiasan'ny Microsoft ary koa ny fampiharana azy. Na ny rafitra mihidy toy ny MacOS aza dia tsy dia be loatra ary malala-tanana kokoa noho ny "genius" an'i Microsoft.
Faly koa aho fa ny ekipan'ny Ubuntu (Cannonical amin'ny ankapobeny) dia nampidina ny sumos ary nanohy ny làlana tokony harahina hatrany, dia ny linux fa tsy MacOS hafa na Microsoft hafa.
Etsy ankilany, vaovao tsara ho an'ireo mpampiasa BSD (Unix), Linux ary rafitra fiasa hafa eny an-tsena, izay manondro fa ny fandrosoan'ireo tontolo ireo dia mitohy mandeha (miadana nefa azo antoka). Faly aho naheno azy ary manantena fotsiny aho fa toy ny GRUB koa SYSLINUX.
Faly ihany koa aho mahita amin'ny sary fa azonao esorina ity hadalana ataon'ny "genius" an'i Microsoft ity ary afaka mametraka sy mametraka izay tadiavinay amin'ny FITAOVANAY (satria anay izy ireo, tsy ampanofaina na manana fahazoan-dàlana).
Raha ny fiheverako manetry tena, raha Microsoft no zazalahy ratsy kilasy dia Apple no bibilon'ny ota voalohany. Tsy manidy ny lozisialy fotsiny i Apple, fa mametra ihany koa ny fitaovana. Raha tsy misy PC mifanaraka aminy dia ho very be isika. Tsy afaka nanova ampahany mora foana izahay ary ny fitaovan'ny solosaina rehetra dia ho toy ny telefaona finday: singa lasitra sy visy manokana na aiza na aiza. Ny fieritreretana azy fotsiny dia manome ahy bonika gisa.
ary teo ny «azo antoka»
fa maninona no be pitsiny?
deactivéé ao anaty bios ary efa voavaha
Ahoana raha tsy hitan'ny mpanamboatra fa mety hampiditra azy io ny mety hanafoanana azy?
Aza adino fa ny Microsoft dia manery ireo mpanamboatra hampiditra sy mamela ny Secure boot aorin'izay ary ny mpanamboatra no manapa-kevitra raha hanajanona izany na tsia.
Hisy motherboard izay mamela azy io ary tsy hiditra amin'ny UEFI fotsiny isika ary hanafoana ny boot Secure, saingy hisy ny tranga izay tsy avelan'ny mpanamboatra azy io na tsy manelingelina ny fampidirany safidy famonoana.
fa hanontany ny olona ao amin'ny magazay raha manana boot azo antoka izy, ary raha izany dia hanontany izy ireo raha afaka kilemaina
Tsy azo atao izany?
Eny, hividy mpanamboatra hafa mamela azy io
Manome anao $ 5000 XNUMX ho an'ny olona hitanao mangataka izany aho. xD
Tsy maintsy mandoa anao izy satria ny isan'ny olona mangataka izany dia tsy misy na mety nanontany ahy aza.
Heveriko fa raha toa ianao ka te hanana boot roa miaraka amin'ny Windor, raha tsy hofongaranao izany dia tsy manomboka ny rafitra ratsy laza.
Vaovao lehibe izany, na izany aza, manontany tena aho raha mamela dualboot, satria ny sasany amintsika dia voaheloka hampiasa Win amin'ny solosainantsika ...
hum, izany dia mamela ny boot roa ...
Eny, nandika azy io ho toy ny hoe tsy mila sonia aho hampandehanana azy ... na dia izany aza, ny fanontaniako dia ny hamelana ireo fikandrana hapetraka ao amin'ny pc handefasana (ilay mila boot azo antoka, mandehana xD )
Amin'ny teôria eny. Ny Pre-Bootloader amin'ny ankapobeny dia mpandefa iray izay mitantana ny bootloader tena izy rehefa avy nandalo ny Secure boot "check".
Ny hany takiana dia ny prebootloader sy ny Bootloader dia mitovy fizarana ary ny Pre-bootloader dia manondro ilay bootloader azo tanterahina, na inona izany na inona.
Ankoatra izany dia tsy haiko hoe hanao ahoana izany amin'ny tranga Windows, mieritreritra zavatra sarotra kokoa noho ny amin'ny trombako aho, fa
Ary raha baoty roa izany dia alaharo arakaraka ny grub ary avelao izy hikarakara ny ambiny.
UUUUYY MBA MAHAROTRA VOLA? MAHAROA BE? TSY MAINTSY NAMPIASA VASELINA IANAO, TSY MISY INDRINDRA NY FITAOVANA MAIMAIM-POANA TSY AZONAO HITANAO VAROTRA AZY
Inona no ifandraisan'i Bill Gates amin'izany rehetra izany? Raha nahazo fampahalalana bebe kokoa ianao dia ho fantatrao fa ny CEO an'ny Microsoft dia Steve Ballmer amin'izao fotoana izao.
Manana varavarankely sy Ubuntu amin'ny fizarazarana samihafa aho ary tsy maintsy milaza aho isan'andro fa afa-po amin'ny rindrambaiko maimaimpoana aho, izao dia manao asa an-dakilasy miaraka amin'ny varavarankely misy ny Libre Office, saingy toa hafahafa amiko ny mahatsikaritra fa misimisy kokoa io. amin'ny varavarankely noho ny amin'ny Ubuntu. Manana DualCore Intel aho ary Gforce 9400GT miampy 2G ondrilahy.
EFA ETO AMIN'NY SEN ~ ORS MICROSOFT IZAY HITSIPIKA AMIN'NY SITRINY NAKATONDRANA FA TSY HITENY NY SEN ~ OR ORIN'NY La Manzanita EO MBOLA MISY MBOLA HATSANGANA NY ZAVATRA REHETRA. Miala tsiny amin'ny enhes, tsy espaniola ny fitendry
Amin'ny lafiny fiaraha-monina dia hisy hatrany ny vahaolana.
Ny fokonolona dia manana vahaolana hatrany amin'ity karazan-javatra ity, ny zavatra tsara momba ny rindrambaiko maimaimpoana.
araka ity vaovao ity http://www.taringa.net/posts/linux/15732411/La-Fundacion-Linux-tiene-un-plan-para-evadir-Secure-Boot.html
»Ity PRE-BOOTLOADER ity dia HANANA SORATRA AUTHENTIC SY VERIFIEDA azo avy amin'ny MICROSOFT
ary izy io no ho tompon'andraikitra amin'ny fanelanelanana amin'ny boot azo antoka mandritra ny boot. Raha vantany vao voamarina ny baoty azo antoka ny maha-azo antoka ny sonian'ny an'ity pre-bootloader ity, izy io dia handefa ilay bootloader tena izy an'ny rafitra tiantsika hatomboka, ka hisorohana ny boot Secure tsy hanakana azy io.
raha izany dia TSY VAHAOLANA IREO satria LINUX HAMPIASA NY MICROSOFTT
Manantena aho fa misy mpijinja sasany hanafoana ny vahaolana sasany tsy hiankina amin'ireo lakileny ireo
Tsy niankina mihitsy ny Linux ary tsy hiankina amin'i Microsoft mihitsy, aza matahotra fa misy vahaolana foana 😉
Ny sonia ho an'ny prebootloader dia tsy maintsy alaina amin'ny alàlan'ny serivisy Microsoft (izay tsy tadidiko ny anarany ankehitriny) izay tompon'andraikitra amin'ny famoahana ny sonia ho an'ny Boot azo antoka, tsy maintsy mandoa ianao ary mameno ny antontan-taratasy mifanaraka amin'izany, fa tsy midika izany ambany noho ny Microsoft no hibaiko ny Prebootloader na ho afaka hanakana azy na zavatra hafa mitovy amin'izany, fomba fiasa iray ihany raha vao lany izy, tsy midika zavatra hafa akory izany, azo ny lakile, voamarina ilay rindrambaiko ary ny tapitra ny «hatrizay».
Ny Prebootloader voamarina araka ny tokony ho izy dia tsy hanana olana amin'ny Secure Boot, izay hanome antsika vahaolana manerantany momba ny olana, ho an'ny bootloader rehetra.
Misy zavatra tsy mazava amiko, ary amin'ireo forum sy bilaogy isan-karazany dia tsy misy hevitra (na tsy hitako), raha apetrako tanteraka ny Linux amin'ny fikandrana windows, inona no hitranga?
Secure boot dia endri-javatra UEFI, tsy misy ifandraisany amin'ny Windows izany, ao amin'ny firmware firmware.
Raha azo atao ny baoty azo antoka, tsy maninona na ny Windows, GNU / Linux, BSD na ny rafitra na ny fitambaran'ireo rafitra napetraka dia mbola hanamarina fa voasonia mandritra ny boot ny rindrambaiko.
Ampifanaraho amin'ny renivohitra ny takelaka lehibe sy ny kely